Flash Future - MYSTERY ZILLION
ဒီနေ့ Flash နဲ့ ပတ်သက်ပြီး နောက်ထပ် ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို ထူးတေဇာ (http://www.htootayzar.com/myblog) ရဲ့ twitter status ကနေ link ရလို့ဖတ်ဖြစ်လိုက်တယ်။ အကုန်လုံး သိကြတဲ့အတိုင်းပဲ Flash က iPhone, iPodTouch, iPad တွေမှာ မရသလို အသစ်ထွက်ရှိမယ့် iPhone OS4မှာလည်း အများမျှော်လင့်သလို မပါဝင်ခဲ့တာ သိကြပြီးတဲ့အတိုင်းပဲ။ ပထမဆုံး Apple က Flv တွေအစား HTML5 ကို video မှာ အသုံးပြုဖို့စတင်ခဲ့တယ်။ HTML5 အတွက် mp4 ကို အသုံးပြုခဲ့တယ်။ အဲလိုပဲ Google ကလည်း HTML5 video ကို စတင် support လုပ်ပြီး youtube မှာ HTML5 video version ကို စမ်းသပ်သုံးစွဲလို့ရနေတာ ကြာပါပြီ။ နောက်ပြီး မကြာခင်မှာ Google Docs တစ်ခုလုံးဟာ HTML5 ကိုပဲ အဓိက သုံးသွားတော့မှာပါ။ Microsoft ကလည်း အသစ်ထွက်မယ့် IE9မှာ HTML5 video ကို စတင်ပြီး support လုပ်ပါတော့မယ်။ Opera ကလည်း HTML5 video ကို support လုပ်နေပါပြီ။
ဒီဆောင်းပါး (http://macapper.com/2010/05/13/opera-joins-the-flash-movement/) ထဲမှာ ရေးထားတဲ့ စာလုံးလေး ကိုတော့ တော်တော်သဘောကျမိတယ်။
вЂњBut at Opera we say that the future of the web is open web standards and Flash is not an open web standards technology.
вЂњFlash does have its purposes and will have its purposes, the same as [Microsoft's] Silverlight and others, especially for dynamic content.
вЂњBut flash asavideo container makes very little sense for CPU, WiFi battery usage etcetera вЂ“ you can cook an egg on [devices] once you start running Flash on them and thereвЂ™sareason for that.вЂќ
Apple က Steve ရေးထားတဲ့ Thoughts on Flash (http://www.apple.com/hotnews/thoughts-on-flash/) ကလည်း ဖတ်ကြည့်သင့်ပါတယ်။
Flash က Video တွေနေရာမှာ ဘယ်လောက် နေရာယူလာနိုင်မလဲ။ HTML5 video နဲ့ Flash နဲ့ ယှဉ်ကြည့်တဲ့အခါ HTML5 video က flash ထက်စာရင် ပိုအဆင်ပြေတယ်။ နောက်ပြီး stackoverflow (http://stackoverflow.com/questions/1086886/html-5-video-tag-vs-flash-video-what-are-the-pros-and-cons) မှာ ဆွေးနွေးထားတာလေးတွေက အရမ်းကောင်းတယ်။ Flash ရဲ့ အဓိက ပြဿနာက Windows မဟုတ်တဲ့ platform တွေမှာ CPU usages အများကြီးသုံးတာပဲ။ Flash က windows ပေါ်မှာ ကောင်းကောင်းလေး အဆင်ပြေပေမယ့် Windows မဟုတ်တဲ့ site တွေမှာ အဆင်မပြေဘူး။ နောက်ပြီး Mac မှာ Flash ကြော်ငြာတွေမှာ ကိုယ်ပိုင် pointer သုံးထားရင် ကြော်ငြာပေါ်က ဖြတ်ပြီး သွားလိုက်ရင် လက်ရှိ pointer ပျောက်သွားတတ်တယ်။
HTML5အားကောင်းလာရင် video/audio, ease of use အားသာချက်တွေကြောင့် web လောက ကနေ flash ပျောက်သွားနိုင်ပေမယ့် Flash software တော့ တောှရုံနဲ့ ပျောက်မသွားနိုင်လောက်ဘူး။ ဒာတောင် website အကုန်လုံးက mobile devices တွေအတွက် မရည်ရွယ်သေးတာရယ် (iPad ကို laptop တွေလို လူတိုင်းနီးပားကိုင်နိုင်လာတဲ့ အချိန်ထိလောက်ပော့)၊ နောက်တစ်ချက်က Adobe က အဲဒီအချက်ကို သိလို့ Flash CS5 မှာ apps တွေထုတ်ဖို့ ipa export feature ထည့်ပေးထားတာရယ်ကြောင့် ကျွန်တောှအထင်တော့ Flash ကြီးကတော့ ဆက်ရှိနေမှာပဲ။ အခုဆို flash game လေးတွေတောင် iphone/ipod touch အတွက် ရည်ရွယ်လာကြတာ တွေ့ရပြီ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့ open technology ဖြစ်လေ ကျွန်တောှတို့ ကြိုက်လေပဲ
သေချာတာပေါ့... Adobe က company ကြီးတစ်ခုပဲ။ သူတို့ကတော့ flash ကို ရှင်သန်အောင် တနည်းသို့မဟုတ် တနည်းကြိုးစားကြမှာပါ။ web ပေါ်မှာတော့ မပျောက်ကွယ်သွားနိုင်ပေမယ့် နည်းသွားနိုင်ပါတယ်။ flash game လေးတွေကတော့ ဆက်ပြီးတော့ ထွက်နေအုံးမှာပဲ။
လူသုံးများနေတဲ့ အရာတစ်ခုဟာ သူ့ထက်ပိုကောင်းတာ ပေါ်လာလည်း တန်ရုံနဲ့ပျောက်ဖို့မလွယ်ပါဘူး။ Flash နဲ့ရေးထားတွေကို အသစ်တစ်ခုထွက်တာနဲ့ အကုန်ပြန်ပြောင်းဖို့ ဘယ်သူမှစဉ်းစားမယ်မဟုတ်ဘူး။ နောင်ကြာလာရင်တော့ မသိဘူးပေါ့လေ ဒါတောင် Flash ကဘာမှထောက်ပံ့မှု့မရှိပဲ ရပ်နေရင်ပြောပါတယ် သူကလည်း ဆက်ပြီးအသစ်အသစ်တွေနဲ့ Development ဆက်နေရင်တော့ ပျောက်ဖို့မျှော်လင့်ချက်နည်းပါတယ်။ Flash ပျောက်မသွားဖို့တော့ ကျွန်တော်ကမျှော်လင့်ပါတယ် Flash နဲ့ဘာတွေရေးနေလဲ ဘာတွေလုပ်နေလို့လဲလို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့ Flash မရှိရင် ကျွန်တော် Farmville ကစားလို့မရမှာ စိုးလို့ပါ :P
web ပေါ်မှာ Flash Game ကို အခုအချိန်မှာ အစားထိုး မထိုးနိုင်သေးပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့ jQuery San Francisco Conference မှာ jQuery နဲ့ AOE လိုမျိုး Game လေးပြသွားတယ်။ Png တွေ အများကြီးသုံးထားပြီး လုပ်သွားတာပါ။ နောက်ပြီး Direct X က web browser ပေါ်တွေမှာ ရလာတော့မှာပါ။ အဲဒီအချိန်ရောက်ရင် 3D Game တွေ online ပေါ်ကို ရောက်လာနိုင်ခြေရှိပါတယ်။ Flash ကတော့ ဆက်ရှိနေအုံးမှာပဲ။ ဒီထက်ပို ပေါ့ပါးလာဖို့ပဲ မျှော်လင့်တယ်။ Linux မှာ Flash run လိုက်ရင် CPU speed က သိသိသာသာ တက်လာတာကို တွေ့ရတယ်။ Windows မှာကတော့ ဘာမှမဖြစ်ပေမယ့် အခြား platform တွေမှာ resource တွေယူလွန်းနေတာကို လျှော့ချနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။
>> HTML5အားကောင်းလာရင် video/audio, ease of use အားသာချက်တွေကြောင့် web လောက ကနေ
>> flash ပျောက်သွားနိုင်ပေမယ့်
Video တခုထဲနဲ့တော့ Flash ပျောက်သွားတယ်ဆိုတာ ရယ်စရာပါ။ Flash က video player software လဲမဟုတ်ပါဘူး။ အရင် HTML standard တွေဟာလက်ရှိနဲ့ လုံး၀သဟာစာတ မဖြစ်ပါဘူး။ Web page တခုထဲမှာ ကြိုက်တဲ့ code တင် run လို့မရပါဘူး။ Canvas drawing တခုတောင်မရဘူး။ Code တခု run ဖို့ Plug-in တခုခုသုံးမှကို ရပါတယ်။ Plug-in ရဲ့ဆိုးတဲ့အချက်ကတော့ သုံးသူ computer ထဲကို download ချ၊ install လုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Flash plug-in ကတော့ (computer ခေတ်အစကတည်းက စျေးကွက်ကိုစိုးမိုးထားတော့) လူတိုင်းနီးပါးဆီမှာရှိပါတယ်။ ဒီတော့ Flash နဲ့ရေးတဲ့ code က browser တော်တော်များများပေါ်မှာ run နိုင်တယ်။ ဒီတော့ video လို HTML က support မလုပ်ဟာအတွက် code ရေးမယ်ဆို Flash ကိုသုံးကြတာပါ။ ဒီလောက်ထိ ရှင်းပြနေတာ၊ Flash က web video လောကကို တမင်စိုးမိုးထားတာ မဟုတ်ဘဲ၊ HTML မစွမ်းခင် ခေတ်တ တာ၀န်ယူထားတဲ့ သဘောပါ။ ခု HTML က video support လုပ်တဲ့အခါ ဘေးဖယ်ပေးရုံပါ။ Flash video တွေမသုံးတော့လို့ Adobe ဒေ၀ါလီ ခံစရာလဲ မရှိပါဘူး။ စကတည်းက Flash က video player လဲမဟုတ်ဘူး။ သူုက multi-media content creation tool သက်သက်ပါ။
>> jQuery San Francisco Conference မှာ jQuery နဲ့ AOE လိုမျိုး Game လေးပြသွားတယ်
Game တခုရေးဖို့၊ canvas drawing တခုလောက် support လုပ်ရုံနဲ့မရပါဘူး။ Game engine တခုဖြစ်ဖို့ draw_pixel() function တခုထက်တော့ ပိုလိုပါတယ်။ Flash မှာတော်တော်ကောင်းတဲ့ content management tool ပါပါတယ်။ Game ရေးဖို့အတွက် သီးသန့် design ထုတ်ထားတယ်လို့ တောင်ပြောလို့ရတယ်။ HTML က game ရေးလို့ရတယ်ဆိုတာ command line application တခုနဲ့ game ရေးလို့ရတယ်လို့ ပြောနေသလိုပါဘဲ။ ရတော့ရတယ်၊ dice game ဘဲရလိမ့်မယ်။ HTML5ရဲ့ ရူးကြောင်ကြောင် marketing တခုသာဖြစ်ပါတယ်။
>> Direct X က web browser ပေါ်တွေမှာ ရလာတော့မှာပါ။
DirectX မဟုတ်ပါ။ OpenGL ပါ။ GL က web ပေါ်တက်သင့်တာကြာပါပြီ။ ခုလဲ Unity လို 3D engine တွေက plugin ချပြီးရင် ကောင်းကောင်း 3D game တွေဆော့လို့ရနေပါပြီ။ ဒါနဲ့ Flash မှာလဲ 3D game တွေကို shader effects တွေနဲ့ ကောင်းကောင်းရေးလို့ရပါတယ်။ plugin လဲ down စရာမလိုပါဘူး။ ဘယ်လောက်မိုက်သလဲ။ WebGL ပေါ်လာရင် အကျိူးရှိမဲ့သူတွေက Flash နဲ့ Unity လို 3D engine တွေပါဘဲ။ ဒါဆို plugin downlaod လုပ်ရတာ သက်သာသွားမယ်။ WebGL ပေါ်လာလို့ Unity လို၊ Flash လို tool တွေပျောက်သွာစရာမရှိဘဲ၊ ပိုတောင်နေရာယူလာပါလိမ့်မယ်။
iPhone/iPad ရဲ့ web browser မှာ Flash-support မလုပ်တာ အပြည့်အ၀ထောက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ SJ ကြီးက Flash ကို iPhone native app ထုတ်တာအထိလိုက်ကန့်ကွက်နေတော့ ဒင်းကို ဘယ်လိုမှ မသတီနိုင်တော့ပါ။ ဘယ် platform မှ ဘာညာ language နဲ့မှထုတ်မှရမယ်လို့ သတ်မှတ်တာ မရှိပါ။ အဆိုးဆုံး Nintendo company ပင်သူ့ Wii DS နဲ့ပတ်သက်ပြီး development language သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိပါ။ အဆိုးဆုံးက Unity လို C# language သုံးတဲ့ engine တွေခု iPhone မှာ develop လုပ်လို့မရတော့၊ SJ နဲ့ Flash တိုက်ပွဲမှာ ကြားညပ်ပြီး သိပ်နစ်နာတယ်။ ဒါ Adobe ကျရှုံးခန်းမဟုတ်ဘဲ iPhone ကျရှုံးခန်းတောင် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ခု Google phone တွေပိုခေတ်စားလာတယ်။ ဒီလို ပေါက်ကရ rule တွေနဲ့ဆို iPhone developer တွေလဲ Google ဘက်ကူးကုန်လိမ့်မယ်။
>> Apple က Steve ရေးထားတဲ့ Thoughts on Flash (http://www.apple.com/hotnews/thoughts-on-flash/)
>> ကလည်း ဖတ်ကြည့်သင့်ပါတယ်။
Steve Jobs ရဲ့ သူများ company ကို မိန်းမလို မိန်းမရ ပုတ်ခတ်ထားတာပါ။ ဒီစာထုတ်ပြီးကတည်းက Steve Jobs ကိုဘယ်လိုမှမကြည်ညိုနိုင်တော့ဘူး။ အရင်က respect တွေလဲအကုန်မြောင်းထဲ သွားပေတော့။ အဆိုးဆုံးက closed source အကြီးအကျယ်လုပ်တဲ့ company က Flash/Flex လို public license ဖွင့်ပေးထားတာကို 100% proprietary လို့ပုတ်ခတ်ထားတာပါ။ iPhone application တခုကို တခြားနေရာကတောင် ရောင်းခွင့်မပေးတဲ့သူုက လွတ်လပ်မှုဆိုတာကြီးကို ရေလွှတ်ပြောနေတာ ရယ်စရာကောင်းတယ်။
မှာ ပြန်ရေးထားပါတယ်။ Flash မသေဆုံးနိုင်ဘူးဆိုတာကိုပေါ့။